प्राथमिक उपचार बिरामीलाई अमृत सरह ! | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्थानिय समाचार म्याग्दी समाचार प्राथमिक उपचार बिरामीलाई अमृत सरह !
प्राथमिक उपचार बिरामीलाई अमृत सरह !
२०७६, २ माघ बिहीबार ०९:१६
भनिन्छ, दशा बाजा बजाएर आउँदैन। कुनैपनि अवस्थामा दुर्घटना जहाँ, जहिले जसरी पनि हुन्छ ।दुर्घटना पूर्व सूचना बिना नै आउँछ। दुर्घटना भइसकेपछि कसरी बच्ने भन्दा पनि हुनुअघि कसरी सर्तक रहने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । दुर्घटनामा घाईते भएकालाई तत्कालै उपचारकै अभावमा ज्यान गुमाउनुपरेका घटनाहरु हाम्रो गाउँ समाजमा धेरै उदाहरणहरु छन्। दुर्घटना भइसकेपछि कसरी बच्ने भन्दा पनि हुनुअघि कसरी सर्तक रहने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ।यस्ता दुर्घटनाबाट हुने क्षतिबाट बच्नका लागि प्राथमिक उपचारको आवश्यक हुन्छ।
प्राथमिक उपचार भनेको बिरामी अथवा घाइतेलाई अस्पताल अथवा स्वास्थ्य संस्थामा पु¥याउनु अगावै घर वा दुर्घटनास्थलमै गरिने उपचारलाई बुझिन्छ। प्राथमिक उपचार भनेको प्रथम उपचार अथवा सुरुमा गरिने उपचार हो। चिकित्सकको आगमन अघि सामान्य उपकरण तथा सामग्रीको प्रयोग गरी गरिने बिरामीको उपचारले विरामी वा घाईतेलाई मृत्युको मुखबाट जोगाउन सकिन्छ। प्राथमिक उपचारले बिरामी अथवा घाइतेलाई तत्काल राहत तथा मानसिक रुपमा खतरामुक्त भएको महशुस गराउन मद्दत गर्दछ।
कुनैपनि घाइतेको प्रारम्भिक उपचारले ठूलो जोखिम घटाइदिने भएकाले पछिल्लो समय प्राथमिक उपचाको सीपका बारेमा बालबालिकादेखि नै सिकाउने गरिन्छ। गएको साता म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई प्राथमिक उपचारका बारेमा ब्यापक जानकारी गराइयो। गाउँपालिकाले पहिलोपटक विद्यालयमा ‘उपाध्यक्षसँग विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा’कार्यक्रम नै सञ्चालन गरी हरेक विद्यालयमै प्राथमिक उपचारका विधि,महत्वका बारेमा जानकारीसँगै एउटा नमुना अभियानलाई विद्यार्थीमा प्रयोग समेत गरियो ।
‘तपाईले पाँच जनाको जिबन बचाउन सक्नुहुन्छ’भन्ने नारासहित ज्यान जोगाउने पाँच उपायका बारेमा विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई तालिम दिइएपछि गाउँपालिकाभित्र प्राथमिक उपचार सम्बन्धि अभियानले निकै चर्चा पाएको छ । एक विद्यार्थीले पाँचजनालाई प्राथमिक उपचार दिने गरी गाउँपालिका भित्रका सबै ७ वटै वडाका मावितहका विद्यालयबाट सुरू भएको कार्यक्रमले नै प्राथमिक उपचारको महत्वलाई प्रष्ट पारेको छ ।
ज्वरो,एलर्जी, पेट दुखेको, टाउको दुखेको, झाडापखाला तथा वान्ता,पानीमा डुबिरहेको, कुकुरको टोकाइ, सर्प टोकाइ, हातखुट्टा भाँचिएका, नाकबाट रगत बगिरहेको, मानिसले खाना खाँदै गर्दा घाटीमा केही कुरा अड्किदा र सर्किदा, हृदयघाटको लक्षण देखिदाँ लगायत विभिन्न समस्या आइपरेको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको प्रतिक्षामा बस्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न तत्कालै आकस्मिक सेवामार्फत ज्यान जोगाउन सकिन्छ ।
प्राथमिक उपचारका लागि सीपसँगै फस्ट एड किटमा राखिने औषधी समेत प्रमुख आवश्यकता हो । दुर्घटना र आकस्मिक अवस्थाहरु अप्रिय हुने भएकाले प्राथमिक उपचारको शिक्षा कलिला बालबालिका देखि बृद्धबृद्धासम्म पु¥याउनुपर्छ । म्याग्दीका भौगोलिक रुपमै विकट, सडक तथा सञ्चार सुविधाबाट समेत बन्चित बस्तीहरूमा प्राथमिक उपचार बिरामी र घाईतेलाई अझै यो बरदान सावित हुन्छ ।
जिल्लामा स्वास्थ्य सेवाका नाममा स्थानीय तहले विभिन्न शिर्षकमा अनावश्यक खर्च गरेको देखिन्छ । शिविर तथा गोष्ठीमै लाखौं सक्ने प्रबृत्तीलाई अन्त्य गदैं बस्तीबस्ती, घरघरमा प्राथमिक उपचारको विधि तथा उपचारमा आवश्यक पर्ने उपकरण, औषधी आदि राख्न सकेमा सामाग्रीको सही प्रयोग सकिन्छ । प्राथमिक उपचारको महत्व अमृत अर्थात कुनै मुल्यसँग तुलना गर्न नसकिने पवित्र जल सरह हुन्छ । बेनी साप्ताहिकबाट साभार
Previous articleबालबालिका ‘डिजिटल एडिक्सन’ को सिकार बन्दै
Next articleच्याउ खाने हो ? राक्सेमा टनेलभित्रै टिप्न पाइन्छ !